Vaovao - Heweiyongtai & “Salon de l'industrie de police” dia nitondra dingana vaovao tao amin'ny SOTH SOFEX JORDAN 2018
Heweiyongtai & "Salon de l'industrie de police" dia nitondra dingana vaovao tao amin'ny SOTH SOFEX JORDAN 2018
Nanomboka ny 8 ka hatramin'ny 10 Mey 2018 (3 andro ny fitambarany), ny SOFEX faha-12 (fampirantiana ny hery miasa manokana sy ny kaonferansa) dia natao tao amin'ny ivon-toeran'ny fampiratiana Amman miaraka amin'ny fanohanan'ny mpanjakan'i Jordania tanteraka.
Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd ho toy ny mpanamboatra matihanina amin'ny fiarovana manokana dia nandray anjara tamin'ity fampirantiana ity niaraka tamin'ny vokatra farany, toa ny Portable X-ray Inspection System, Portable explosive Detector, Hazardous Liquid Detector, Intelligent explosive Ordnance Disposal Robot sns. . Ny vokatra marobe isan-karazany dia manarona ny fizahana fiarovana, fanaporofoana ny fipoahana, fanilihana orzaza mipoaka, fanadihadiana heloka bevava, famotopotorana ara-teknika, fanaraha-maso, fanoherana ny fanaraha-maso, famonjena, fanaraha-maso ny afo, fanoherana ny fampihorohoroana, sns. hijanona hianatra. Ny fampisehoana dia nahatanteraka ny vokatra andrasana.
Mandritra ny fampirantiana dia hita taratra amin'ny mpijery ny vokatray. Ireo mpampiasa polisy any amin'ny firenena maro sy ireo fampiratiana mifandraika amin'izany dia nijanona mba hianatra momba ny fiasa, ny fampiharana ary ny fitsipiky ny vokatra amin'ny antsipiriany. Liana izy ireo ary te hiditra amin'ny sehatry ny fandraharahana ho an'ny fikasana fiaraha-miasa bebe kokoa aorian'ny fiderana ny fahafaha-mampihatra sy ny universal ny vokatra.
Andriamatoa Xu Menglin, mpitantana ny marketing ao amin'ny departemantan'ny varotra iraisam-pirenena Heweiyongtai dia naneho vokatra sy asa ho an'ny mpitsidika.
Ny masoivoho sinoa any Jordania Andriamatoa Pan weifang dia nitsidika ny helo heteiyongtai
Andriamatoa Wang Junfei, talen'ny varotra ao amin'ny departemantan'ny varotra iraisam-pirenena heweiyongtai, dia naneho vokatra sy asa ho an'ny mpitsidika.
Heweiongtai namboarina Portable X-ray Scanner System dia niseho tao SOFEX Jordania
Heweiyongtai novolavolain'ny tenany momba ny rafitra fandinihan-dàlana amin'ny alàlan'ny fahitana amin'ny alina any SOFEX Jordania
Heweiyongtai dia namolavola tena Mihaino na dia Wall any SOFEX Jordania aza
Ity fampirantiana ity dia tsy vitan'ny hoe manatsara ny lazan'ny orinasa any amin'ny faritra Afovoany Atsinanana sy mampivelatra ny varotra vokatra, fa manome ny orinasa hahatakatra ny haitao mandroso manerantany ary hampiroborobo ny fanavaozana ny teknolojia sy ny fampandrosoana ny orinasa.
Mba hampiroboroboana ny fifandraisana eo amin'ny sehatry ny polisy sinoa sy ny mpiara-miasa aminy ampitan-dranomasina, i Heweiyongtai dia namindra ny hetsika "Salon Industry Police" notontosaina tao Shina nandritra ny taona maro tany ampitan-dranomasina, ary nampiantrano tamim-pahombiazana ny hetsika "Salon Industry Salon niditra tao SOFEX Jordan".
Voninahitra lehibe ho an'ny salon ny manasa ireo tompon'andraikitra ambony amin'ny vondrona Friginal Safran, izay nianatra tany Chine ary afaka mifampiresaka amin'ny teny sinoa, ary manasongadina fa betsaka ny fotoana azon'ireo orinasa sinoa any Jordania. Manana tombony ihany koa ny salon hanasa ireo sangany avy any amin'ny Shenzhen Hytera, Beijing Pufan, Shanghai HRSTEK, Guangzhou Zhongli, Ningxia Senno, Bayern Messe, sns. Andriamatoa Gerry Wang, tale jeneralin'ny departemantan'ny varotra iraisam-pirenena Heweiyong, no nampiantrano ny Salon sy ny solontena avy amin'ny Hytera, HRSTEK, Senno ary Heweiyongtai, dia nafana fo niteny.
Sarin'ny vondrona vondrona
Andriamatoa Mehid, tompon'andraikitra ambony an'ny Safran SA, dia nizara ny zavatra niainany tamin'ny fampandrosoana ny tsena
Ny injenieran'ny marketing an'ny Hytera any Moyen Orient dia niresaka fepetra telo ahombiazana amin'ny fampivoarana ny tsenan'i Jordania. Voalohany, mitady mpivarotra matanjaka amin'ny fampirantiana. Faharoa, ampiasao ny mpiasa ao an-toerana amin'ny tenin-drazany sy ny kolontsain'izy ireo hizaha ny tsena eo an-toerana. Fahatelo, manangana toerana iray hanomezana fahatokisana sy fahatokisana lehibe ny mpanjifa eo an-toerana, izay manondro fa ny orinasa dia manao asa maharitra ary afaka mamaly ny fangatahan'ny mpanjifa mangataka serivisy fanampiana ara-teknika, serivisy aorian'ny varotra amin'ny fotoana rehetra. Amin'izao fotoana izao, Hytera dia nahazo orinasa marika marobe avy amin'ny Anglisy, Alemanina, Kanadiana, ary manana birao mihoatra ny 200 manerantany miaraka amin'ireo mpiasa efa ho 10.000 ary nahavita zava-bita mahatalanjona.
Injeniera marketing an'ny Hytera any Moyen Orient dia nizara ny traikefa ara-barotra
Ny solontenan'ny orinasa hafa dia niresaka momba ny fampiroboroboana ny tsena any ampitan-dranomasina, ny fomba tokony hiarahan'ny orinasa kely sy salantsalany mifanakalo ary mifanakalo amin'ny fampandrosoana.
Fotoana fandefasana: Mey-15-2018
Rafitra fizahana fiara fitaterana finday, Rafitra fitiliana fiarovana X-Ray azo entina, Masinina scanner X-Ray azo entina, Scanner X-Ray Portable, Fitaratra fitiliana fiara, Fakan-tsary fakan-tsary,